Kenya oo Sadex Shuruud ku xirtay in xal laga gaaro Xiisada kala dhaxeysa Somalia !!
Monday February 18, 2019 - 14:23:27 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Waxaa meeshii ugu xumaa gaaray Xiriirka Dublumaasiyadeed ee u dhaxeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kadib markii Xukuumada Nairobi ay shaacisay in xiriirka Diblumaasiyadeed u jartay Soomaaliya.
Xiisada Diblumaasiyadeed ee hada u dhaxeeya labada wadan ayaa noqotay mid si weyn loo hadal hayo, waxa ayna dowlada Kenya shuruudo adag ku xirtay in xal laga gaaro xiisada Diblumaasiyadeed ee kala dhaxeeya Dowlada Soomaaliya.
Kenya ayaa sadexdan Shuruud ku xirtay Wadahadal Diblumaasiyadeed ay la yeeshaan Soomaaliya.
1- In Somalia ay sida ugu dhaqsaha badan kaga laabato Khariidada lagu soo bandhigay Shirweynihii Dhaqaalaha ee dhawaan lagu qabtay magaalladda London, oo ay Somalia ku sheegatay xuduud-baddeedka Kenya.
2- Inay DFS u sheegto kuwa iibsaday Xirmooyinka Shidaalka iyo Gaaska ee Xaraashkii London inay Somalia lahayn Deegaankaas waa sida ay hadalka u dhigeen.
3- Dowladda Kenya waxay kaloo doonaysaa in Xalka Muranka Xuduud-baddeedka ee u dhexeeya labada Waddan in xal saaxiibtinimo (xaalmastuur) oo la isla oggol yahay wada gaaraan oo ka baxsan Maxkamadda Caalamiga ee ICJ.
Masuul katirsan Dowlada Kenya ayaa sheegay in shuruudahan hadii ay Soomaaliya ogolaato macquul tahay in lawada hadlo xalna laga gaaro xiisada diblumaasiadeed ee hada labada wadan u dhaxeysa.
Dowlada Kenya ayaa ujeedkeeda ugu weyn yahay in Soomaaliya ka laabato Dacwada Muranka Badda ee kala dhaxeeya dowlada Kenya, waxa ayna Kenya rumeesan tahay hadii Maxkamada dacwadan loo daayo in aysan waxbo heleyn oo guul dareesaneyso.